WINE 6.0-rc3 ikozvino yawanikwa, iine mashoma gadziriso | Linux Vakapindwa muropa
WainiHQ inowanzo kuburitsa vhezheni yekuvandudza vhiki mbiri dzese, uye inoita saizvozvo nenguva yakakodzera yakakodzera wachi yeSwitzerland. Aya mavhiki maviri anoenda mune imwe apo kuvandudzwa kweWindows software yekuteedzera software pane mamwe masisitimu anoshanda kwasvika padanho razvino, kana vatanga kuburitsa Vanosunungura Vanodaidzwa. Saka, mushure mekutanga uye yechipiri yevhiki rapfuura, maawa mashoma apfuura akatanga WAINI 6.0-rc3.
Muchikamu chino, pane nhau, asi ivo havatombotauri rondedzero ine yakanyanya kusarudzika, nekuti yasvika pakuomeswa kwemabasa uye ivo vatanga kutarisa kwavo polisha iyo software uine chinangwa chekutanga iyo yakagadzikana vhezheni. Zvakadaro, ivo vanotaura kugadziriswa 19 uye huwandu hweshanduko makumi matanhatu neshanu. Iwe haufanire kunge uri lynx kuti uone kuti kune akawanda mashoma pane iwo mazana anounzwa mune mamwe mavhiki, asi zvataurwa ndezvekuti isu tatova muchikamu chinotonhora.
WINE 6.0 ichaburitswa muna Ndira
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.0-rc3 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y uyu mumwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.0-rc3 ikozvino yavapo, paine zvigadziriso zvishoma zvezvinhu zvinotonhora